Iyo Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu anchovha bhasikoro muUK | Ndinobva mac
Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu anchovha bhasikoro muUK
Zvinotaridza kuti Apple Watch yakachengetedza hupenyu hwemunhu aichovha bhasikoro uyo akakukurwa nerukova rwizi rwuchikwira. mabvazuva Akanga akapfeka Apple Watch iyo yaakakwanisa kubata nayo timu yekununura mushure mekubatwa mumuti.
Mune ino kesi rwizi Wye, rwunonzi neWikipedia ndirwo: «rwizi ipfupi rwemahombekombe kuUK English Channel materu ayo anomhanya achipfuura mudunhu reDorset»Akashamisika mutasvi uya aive abatwa mushure mekuyerera kwayo. Kutenda iko kusheedzera kune ve emergency mabasa newachi yako kununurwa kwakachengeteka uye kwakanaka.
Mutungamiriri wenzvimbo yekudzikinura Sean Bailey, akatsanangura nyaya iyi pawairesi yemuno uye BBC Nhau dzinozvinyora pawebhusaiti yayo, kuti nekuda kwekufona kwakaitwa neApple wachi vanga vachitaura nezve nzvimbo nedambudziko raive nemunhu uyu. Iye bhasikoro akatsvairwa zasi, Bailey akatsanangura, akakwanisa kukwira mumuti ndokufona newachi yake kune ve emergency.
Rwizi Wye runopfuura nemuRotherwas muHereford uye rwuri pedyo nemuganhu pakati peEngland neWales rwaidzikira zvakanyanya nekuda kwemafashama uye nerombo rakanaka kune wese munhu nyaya yakapera zvakanaka. Chero zvazvingaitika, kuve nesarudzo yekufona nekukurumidza newachi, naSiri kana zvakafanana kunogona kuponesa hupenyu hwedu sezvakaitika kune uyu anofamba bhasikoro. Mazuva maviri apfuura isu takatsanangura mukati Ndiri kubva kuMac kumwe kunofadza kupera ne kubiwa kwemukadzi kuTexas.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inoponesa hupenyu hwemunhu anchovha bhasikoro muUK
AirTags yaigona kuona mwenje wezuva pakupera kwegore. Iyo Cyrill kambani inoisa zvimwe zvekushandisa pane pre-kutengesa
Kana pasina Apple Car, varikudei ma patents aya?